U-Alexander von Humboldt - uMsunguli we-Modern Geography
UCharles Darwin wachaza ngokuthi "yindwendwe enzululwazi oye waphila." Uhlonishwa kakhulu njengomnye wabasunguli belijografi zanamhlanje. Uhambo luka-Alexander von Humboldt, iimvavanyo kunye nolwazi olwenziwa kwintsimi yesentshona kwikhulu le-18.
U-Alexander von Humboldt wazalelwa eBerlin, eJamani ngo-1769. Uyise, owayengumphathi wezempi, wafa xa wayeseneminyaka engama-9 ubudala waza yena kunye nomntakwabo uWilhelm bakhuliswa ngumama wabo obandayo nabandayo.
AbaTutors banikezela ngemfundo yabo yokuqala eyayisekelwe kwiilwimi kunye nemathematika.
Emva kokuba sele ekhulile ngokwaneleyo, uAlexandria waqala ukufundisisa kwi-Freiberg Academy yeMigodi phantsi kwe-geologist eyaziwayo uG AG Werner. UVon Humboldt wadibana noGeorge Forester, uKapiteni James Cook wefayili yenzululwazi ukusuka kweso sibini, kwaye bahamba bejikeleza ngeYurophu. Ngo-1792, eneminyaka eyi-22 ubudala, u-von Humboldt waqalisa umsebenzi njengomhloli weemigodi kaRhulumente waseFranconia, iPrussia.
Xa wayeneminyaka engama-27, unina ka-Aleksandro wafa, wamshiya njengomvuzo omkhulu kwifa. Ngomnyaka olandelayo, washiya inkonzo karhulumente waza waqala ukucwangcisa ukuhamba kunye no-Aime Bonpland, isityalo se-botanist. Lo mbini waya eMadrid waza wafumana imvume ekhethekileyo kunye neepassports ezivela kuKing Charles II ukuhlola iNingizimu Melika.
Xa befikile eMzantsi Melika, uAlexander von Humboldt noBonpland bafunda i-flora, imfuyo kunye negrafu yelizwekazi. Ngowe-1800 von Humboldt uvezwe malunga neekhilomitha ezingama-1700 zomlambo wase-Orinco.
Oku kwalandelwa luhambo ukuya kwi-Andes kunye nokunyuka kweMat. I-Chimborazo (kwi-Ecuador yanamhlanje), ngoko ikholelwa ukuba iyintaba ende kunazo zonke ehlabathini. Abazange bawenze phezulu ngenxa yecala lokudonga kodonga kodwa bakhwela kwii-18,000 inyawo ekuphakameni. Ngexesha elunxweme olusentshonalanga yaseMzantsi Melika, u-von Humboldt walinganisa waza wafumana i-Peruvian Current, leyo, phezu kwezichaso zikaVon Humboldt ngokwakhe, yaziwa nangoku njengeHumboldt Yamanje.
Ngo-1803 bahlola iMexico. U-Alexander von Humboldt wanikelwa isikhundla kwiKhabhinethi yaseMexico kodwa wala.
Uhambo oluya eMelika naseYurophu
Aba babini baqinisekiswa ukuba batyelele iWashington, DC ngumcebisi waseMerika kwaye benza njalo. Bahlala eWashington ngeveki ezintathu kwaye von Humboldt babe neentlanganiso ezininzi kunye noTomas Jefferson kwaye bobabini baba ngabahlobo abalungileyo.
UVon Humboldt waya e-Paris ngo-1804 waza wabhala imiqulu engamashumi amathathu malunga nokufunda kwakhe kwimihlaba. Ngexesha lokuhamba kwakhe eMerika naseYurophu, wabhala waza wachaza ngokunyuka kombane . Wahlala eFransi iminyaka engama-23 waza wadibana nabanye abantu abaninzi.
I-Honold Humboldt yaxhamla ngokugqithiseleyo ngenxa yokuhamba kwakhe nokunyathelisa kwakhe ingxelo. Ngomnyaka we-1827, wabuyela eBerlin apho wafumanisa imali engenayo ngokuba ngumcebisi weKumkani wasePrussia. UVon Humboldt wabuzwa kamva kwiRashiya emva kokuba ahlolisise isizwe kwaye achaza ukufumana izinto ezifana ne-permafrost, wakhuthaza ukuba iRashiya imise imimiselo yezulu kwilizwe lonke. Izikhululo zaqulunqwa ngo-1835 kunye noVon Humboldt bakwazi ukusebenzisa idatha ukuphuhlisa umgaqo-siseko welizwekazi, ukuba iingongoma zeplanethi zinamazulu amaninzi ngenxa yokungabikho kwamandla okuthoba ukusuka elwandle.
Kwakhona wavelisa imephu yokuqala ye-maple, eneemigca yokulingana kwamaqondo aphezulu.
Ukususela ngo-1827 ukuya ku-1828, uAlexander von Humboldt wanikeza iintetho zomphakathi eBerlin. Ezi zifundo zazidume kakhulu kangangokuba iindibano zendibano ezintsha zafunyanwa ngenxa yemfuno. Njengo-von Humboldt ekhulile, wagqiba ekubeni abhale yonke into eyaziwayo ngomhlaba. Wabiza umsebenzi wakhe uKosmos kunye nomqulu wokuqala wanyatheliswa ngo-1845, xa wayeneminyaka engama-76 ubudala. I-Kmosmos yayibhalwe kakuhle kwaye yamkelwa kakuhle. Umqulu wokuqala, umxholo jikelele wendalo yonke, uthengiswa ngeenyanga ezimbini waza waguqulelwa ngokukhawuleza ngeelwimi ezininzi. Eminye imiqulu igxile kwizinto ezinjengomzamo womntu ukuchaza umhlaba, i-astronomy, kunye nokusebenzisana kwabantu. UHumboldt wafa ngowe-1859 kwaye isihlanu kunye nomqulu wokugqibela wanyatheliswa ngo-1862, ngokusekelwe kumanqaku akhe ngomsebenzi.
U-von von Humboldt wafa, "akukho mfundi ongenako ukuthemba ukuba akayi kuqonda ulwazi lwehlabathi ngomhlaba." (Geoffrey J. Martin, kunye noPreston E. James. Zonke iiNkcubeko ezinokwenzeka: Imbali yeengcinga zeGeographical. , Iphepha 131).
UVon Humboldt wayeyinkosi yokugqibela eyinyaniso kodwa enye yeyokuqala ukuzisa i-geography kwihlabathi.
Izigqeba: 'Abanye' abafudukayo abangekho mthethweni
Yimiphi iMveliso Eyiprojekthi yeTony Hawk ye-8 Sound Soundtrack?
Iinjongo Ootitshala bafanele batshale kwiNyaka entsha yesikolo
Indlela Iincwadi ZeBhayibhile Ezihlelwe Ngayo
Iimpawu zeMichiza eziqala ngeNcwadi ye-O